Waad ku mahadsan tahay inaad booqatay boggayaga internetka iyo dib u eegista siyaasaddayada khaaska ah. Siyaasaddayadu waa caddahay: Ma ururinno macluumaad adiga kugu saabsan, aan ka ahayn macluumaadka si toos ah loo ururiyo oo loo kaydiyo (hoos eeg), marka aad booqato mareegahayaga ilaa aad doorato inaad na siiso macluumaadkaas mooyee.
Macluumaadka Si Toos Ah Loo Uruuriyay Oo Loo Kaydiyay:
Markaad ka dhex dhex gasho shabakad kasta, macluumaadka gaarka ah ee adiga kugu saabsan ayaa la ururin karaa. Waxaan si toos ah u uruurineynaa oo aan si ku meel gaar ah u keydineynaa macluumaadka soo socda ee ku saabsan booqashadaada: * Magaca domainka aad isticmaasho si aad u gasho internetka (tusaale, gmail.com, haddii aad isticmaaleyso akoon Gmail, ama stanford.edu, haddii aad ku xiran tahay. oo ka socda domainka Jaamacadda Stanford); * taariikhda iyo wakhtiga booqashadaada; * boggaga aad booqatay; iyo * ciwaanka mareegaha aad ka timid markii aad booqatay. Waxaan macluumaadkan u isticmaalnaa ujeeddooyin xisaabeed iyo si ay nooga caawiso ka dhigista boggayaga mid faa'iido u leh booqdayaasha. Haddii aan si gaar ah loo sheegin, macluumaad dheeraad ah oo adiga kugu saabsan lagama ururin doono.
Macluumaadka Shakhsi ahaan loo Bixiyay:
Looma baahna inaad na siiso macluumaadka shakhsiyeed si aad u booqato mareegahayaga. Haddii aad doorato inaad na siiso macluumaad dheeraad ah oo adiga kugu saabsan fariin iimayl ah, foom, sahamin, iwm., waxaanu hayn doonaa oo kaliya macluumaadka ilaa inta loo baahan yahay si looga jawaabo su'aashaada ama si loo fuliyo ujeedada la sheegay ee isgaarsiinta iyo waxaa ilaalinaya Xeerka Qarsoonnimada kaas oo xaddidaya isticmaalkeena, haddana ogolaanaya siidaynta qaarkood.
Daah-furka: Help Me Grow WA ma daaha ka qaaday, ma bixiso, ma iibiso ama ma wareejiso macluumaad shakhsi ah oo ku saabsan booqdayaashayada, ilaa loo baahdo sharci fulinta ama qaanuunka.
Gudbinta Xogta Xasaasiga ah
Dhammaan macluumaadka shakhsiyeed ee nala siiyo waxa lagu kaydiyaa kaydadka kaydka ee ku yaal server-yada kuwaas oo ka dambeeya dab-damiska. Deeqaha lagu sameeyo mareegahayaga waxa lagu farsameeyaa PCI/CISP (Barnaamijka Ilaalinta Xogta Xogta Warshada Kaarka Bixinta/Barnaamijka Xogta Kaarka Haysta) oo la sifeeyo iyadoo la isticmaalayo 256-bit SSL encryption. Xeerarkan qarsoodiga ah ee heerka sare ah iyo hab-maamuuska amniga (Secure Socket Layer-SSL) waa hab-maamuuska amniga halbeegga warshadaha, kaas oo adkeynaya qof kasta inuu farageliyo deeqda iyo macluumaadka shakhsiyeed ee aad noo soo dirto.
Markay tahay Help Me Grow WA, ilaalintu waxay u diyaarsan tahay si loo bixiyo amniga xogta loogana hortago gelitaanka aan la ogolayn ee macluumaadka shakhsiga lagu aqoonsan karo. Isticmaalayaasha goobta waa in ay ogaadaan, si kastaba ha ahaatee, in Help Me Grow WA aysan dammaanad qaadi karin fashilka qalabka, dhibaatooyinka farsamada, faragelinta aan la ogolayn, ama dhacdooyinka kale ee keeni kara jebinta ilaalintan iyo helitaanka macluumaadka shakhsiyeed ee suurtogalka ah.
Xidhiidhada Afeefta Qarsoonnimada Goobaha Dibadda
Shabakadda Help Me Grow WA waxa ku jira xiriirinta mareegaha kale ee internetka. Kuwaas waxaa ka mid ah isku xirka shabakadaha ay maamusho dowladda, ururada aan faa'iido doonka ahayn, iyo hay'adaha kale. Markaad ku xidho goob kale, hadda kama aad joogtid HelpMeGrowWA.org, oo Siyaasaddan Qarsoonidu hadda ma socoto. Markaad ku xidho shabakad kale, waxaad hoos imaanaysaa siyaasada khaaska ah ee goobtaas waana inaad ka taxadartaa bixinta macluumaadka shakhsiyeed.